တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး ကို မော်ရင်ဟို ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ အချက် ၃ ချက် - SPORTS MYANMAR
တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး ကို မော်ရင်ဟို ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ အချက် ၃ ချက်
အသင်း ကို အလယ် အလတ် အဆင့် ကနေ ထိပ်သီး ကလပ် တစ်ခု အဆင့် ကို ရောက်အောင် ဆွဲတင် ပေးခဲ့တဲ့ နည်းပြ ပိုချက်တီနို နဲ့ စပါး တို့ လမ်းခွဲ ခဲ့ပါပြီ ။ ဒါဟာ ဘောလုံး လောက အတွက် အံ့အား သင့်စရာ ဖြစ်သလို မော်ဒန် ဘောလုံး လောက မှာ အောင်မြင်မှု ကို အချိန်ပြည့် ရယူ ဖို့ လိုအပ် တယ်ဆိုတာ ကို ရော ၊ သည်းခံ နားလည် ပေးနိုင်စွမ်းတွေ လျော့နည်း လာပြီ ဆိုတာ ကို ရော သတိပေး လိုက် သလိုပါပဲ ။ အခု ခေတ် မှာ နည်းပြ စလုပ်မယ့် သူတွေ အတွက် တော့ ပိုချက်တီနို ရဲ့ ဖြစ်ရပ် ဟာ ထိတ်လန့် စရာ ပါပဲ ။
ပိုချက်တီနို နဲ့ လမ်းခွဲ အပြီး မှာတော့ စပါး နည်းပြ သစ် ရာထူး အတွက် သတင်းတွေ ပလူပျံ လာခဲ့ ပါတယ် ။ အားလုံး ရဲ့ အထက် မှာတော့ ဂျိုဆေး မော်ရင်ဟို က ရပ်တည် လို့ နေခဲ့ သလို တကယ်တမ်း မှာလည်း မော်ရင်ဟို ကို နည်းပြသစ် အဖြစ် ခန့်အပ် သွားခဲ့ ပါတယ် ။
မော်ရင်ဟို ဘာကြောင့် စပါး ကို ရွေးချယ် ခဲ့ရတာလဲ . . . အမေး ရှိရင် အဖြေတော့ ရှိရ မှာပါ ။ အခု ဖော်ပြ မယ့် အရာတွေ ကတော့ စပါး ကို မော်ရင်ဟို ဘာကြောင့်ရွေးချယ် ခဲ့တယ်လို့ စာရေးသူ ထင်မြင်တဲ့ အကြောင်း အရင်းတွေ ပါပဲ ။
၁ ။ လန်ဒန်
ပေါ်တူဂီ သားကြီး အတွက် လန်ဒန် ဟာ အရမ်းချစ်တဲ့ ဇာတိမြေ တစ်ခု လိုပါပဲ ။ ချဲလ်ဆီး နဲ့ ၂ ကြိမ်တိုင် နေထိုင် ဖြတ်သန်း ခဲ့တဲ့ အင်္ဂလန် ရဲ့ မြို့တော် မှာ မော်ရင်ဟို အတွက် များပြားတဲ့ အမှတ်တရ တွေ ရှိနေခဲ့ မှာ အသေအချာ ပါပဲ ။
မော်ရင်ဟို ဟာ လန်ဒန် မှာ နေအိမ် ပိုင်ဆိုင် ထားပြီး မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကို ကိုင်တွယ်ခဲ့တုန်းက မိသားစု ဟာ လန်ဒန်မှာ ကျန်ရစ် ခဲ့လို့ မော်ရင်ဟို တစ်ယောက် အိမ်လွမ်း ဝေဒနာ ကို ဟိုတယ် အခန်းထဲ မှာ တစ်ယောက်တည်း ခံစားခဲ့ရ ပါတယ် ။ အခု ဒီ ဝေဒနာကို ထပ်ပြီး ခံစား ရမှာ မဟုတ်တော့ ပါဘူး ။ ဒါကြောင့် လန်ဒန် ဟာ မော်ရင်ဟို စပါး ကို ရွေးချယ် ခဲ့တဲ့ အချက်တွေ ထဲက တစ်ချက် ဖြစ်မယ်လို့ ယူဆမိပါတယ် ။
၂ ။ စပါး ရဲ့ ကစား သမား အင်အား
စပါး ရဲ့ အင်အားက မခေ ပါဘူး ။ တကယ်တမ်း ပြောရရင် လီဗာပူး နဲ့ မန်စီးတီး ပြီးရင် အတောင့်တင်းဆုံး လို့ တောင် ပြောလို့ ရနိုင် ပါတယ် ။ ရှေ့တန်း မှာ ဟယ်ရီကိန်း လို ဂိုးသွင်း ကောင်းတဲ့ တိုက်စစ်မှုး ရှိသလို ဆွန် ၊ မော်ရာ တို့ရဲ့ တောင်ပံ တွေ ကလည်း လျှင်မြန်ပြီး ဂိုးသွင်း အားရော ဖန်တီးမှုအားပါ ကောင်းမွန် ပါတယ် ။
လာမယ်လာ ၊ အလီ တို့ ဟာ လည်း အရန် အဆင့် မက တဲ့ အရန် တွေပါ ။ ကွင်းလယ် မှာ အဲရစ်ဆင် ၊ ၀မ်ယာမာ ၊ အန်ဒွန်ဘီလီ တို့လို ကစား သမား ကောင်းတွေ ရှိနေ ပါတယ် ။ နောက်တန်း ကလည်း ၀ါရင့်တွေ နဲ့ လူငယ် ကစား သမားတွေ ကို ပေါင်းစပ် ထားတာပါ ။ ဟူဂိုလိုရစ် ရဲ့ အတွေ့ အကြုံ နဲ့ လက်စွမ်း ကလည်း ( ဒီနှစ်ထဲ မှာ ကျဆင်းနေတယ် ဆိုရင်တောင် ) ထိပ်တန်း အဆင့် မှာ ရှိနေတာပါ ။ ဒါတွေက မော်ရင်ဟို အတွက် စဉ်းစား စရာ ဖြစ်နိုင် ပါတယ် ။
၃ ။ တိုးတက်မှု အခြေအနေ
စပါး ဟာ ဒီနှစ် မှာ အဆင့်တွေ ထိုးကျ ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်တွေ ကို ပြန်ကြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ သူတို့ ဟာ ပိုချက်တီနို လက်ထက် မှာ တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့် တိုးတက် လာခဲ့တာ ကို ငြင်းလို့ မရနိုင်် ပါဘူး ။ စပါး ဟာ ထိပ်ဆုံး လေးသင်း ထဲ လည်း ၀င်ခဲ့ပြီး ပြီ ၊ အဆင့် ၂ နေရာ ကိုလည်း ရခဲ့ပြီး ပြီ ၊ ဖလား ပွဲတွေ မှာ ဒုတိယ ဖြစ်ခဲ့ ပြီးပြီ ၊ ချန်ပီယံ လိဂ် ဖိုင်နယ် ကို လည်း တက် ခဲ့ပြီးပါပြီ ။ ဒါဟာ တိုးတက် လာမှုတွေ ပါ ။
သူတို့ လိုအပ် တော့တာက ဆုဖလား တွေ ကို ထိတွေ့ ကိုင်မြှောက် ဖို့ပါပဲ ။ စပါး အတွက် အောင်မြင်မှု ဟာ လက်တကမ်း ကို ရောက်နေပါပြီ ။ ဒါကို ထိတွေ့ ပေးနိုင်မယ့် ဦးဆောင်သူ တစ်ယောက် လိုအပ် နေခဲ့ တာပါ ။ အဲ့ဒီ လူ ဟာ သူ ဖြစ်သင့်တယ်လို့ မော်ရင်ဟို တွေးကောင်း တွေး မိနေနိုင် ပါတယ် ။
ဒီ အချက်တွေ ကတော့ မော်ရင်ဟို အနေနဲ့ စပါး ကို ရွေးချယ် ခဲ့တယ်လို့ ခံစားမိ တဲ့ အချက်တွေ ပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် စပါး ဟာ မော်ရင်ဟို ရောက်လာတာ နဲ့ ဗြုန်းဆိုပြီး စူပါ အသင်း တစ်သင်း ဖြစ်သွား မှာ မဟုတ် ပါဘူး ။ အသင်း မှာ လိုအပ်ချက် တွေ ရှိနေတာ ကြောင့် အခုလို ကျဆင်းလာ ရတာ ဖြစ်ပြီး ဒါကို ပြုပြင် အားဖြည့်ရဦး မှာပါ ။
ဒါကြောင့် မော်ရင်ဟို ကို ခေါ်မယ် ဆိုရင် တော့ ဒန်နီရယ် လီဗိုင်း တို့ ဇန်နဝါရီ မှာ ငွေသုံးပေးဖို့ လိုပါလိမ့်မယ် ။ ဒီလို မှ မဟုတ်ရင်တော့ မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် လုပ် ခဲ့မိ သလိုမျိုး မော်ရင်ဟို ကို ခေါ်ပြီး နာမည် ဖျက်နေသလို ဖြစ်နေဦး မှာပါ ။
မော်ရင်ဟို တစ်ယောက် သူ့ရဲ့ အောင်မြေပေါ် ကို ပြန်လည် ခြေချ ခဲ့ ပါပြီ ။ ပေါ်တို ၊ အင်တာ မီလန် တို့ နဲ့ အတူ လုပ်ပြ ခဲ့သလိုမျိုး စပါး ကို မော်ရင်ဟို လုပ်ပြ နိုင်မလား . . . လည်လိမ် နေတဲ့ ကြက်ဖကြီးကို တိုက်ကြက် အသွင် ဖြစ်အောင် ပြုပြင် နိုင်မှာလား ဆိုတာ အရမ်း စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းနေ တော့မှာပါ